Xavi Oo Doonaya In Barcelona Ay La Soo Wareegto Mohamed Salah Qiimo Kasta.
HomeWararka CiyaarahaXavi oo doonaya in Barcelona ay la soo wareegto Mohamed Salah qiimo kasta.
November 15, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Warka Xiisaha Leh 0
Tababaraha cusub ee Barcelona Xavi ayaa lagu soo waramayaa inuu go’aansaday in kooxdiisa ay la soo wareegto weeraryahanka Liverpool Mohamed Salah .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Masar ayaa qaab ciyaareed heer sare ah ku soo bandhigay Reds intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2021-22, isagoo dhaliyay 15 gool, waxaana uu diiwaan geliyay lix caawin 15 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Salah ayaa wax ka yar 18 bilood uga harsan tahay qandaraaskiisa Anfield, inkastoo Liverpool ay ilaa hadda ka niyad jabtay isku daygii ay ku doonaysay inay weeraryahanka u kordhiso heshiiska.
Sida laga soo xigtay El Nacional , Xavi ayaa si aad ah u doonaya in Barcelona ay la soo wareegto weeraryahan heersare ah xagaaga soo aadan, waxaana tababaraha reer Spain uu aaminsan yahay in Salah uu noqon doono mid ku haboon kooxda.
Warbixinta ayaa sheegeysa in tababaraha cusub ee Camp Nou uu doonayo xiddiga reer Masar qiimo kasta, iyadoo Real Madrid ay u badan tahay inay beeca xorta ah kula soo wareegto Kylian Mbappe sanadka soo socda.
Dhibaatada dhaqaale ee Barcelona ayaa keentay inay lumiso Lionel Messi, laakiin kooxda reer Catalan ayaa la filayaa inay ku jirto xaalad aad u xasilloon ka hor ololaha 2022-23.
Salah ayaa dhaliyay 140 gool waxaana loo diiwangeliyay 53 caawin 218 kulan oo uu u saftay Liverpool tan iyo markii uu ka soo dhaqaaqay Roma bishii July 2017